NgoMsombuluko, Agasti 20, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Uma uzibuza ukuthi abathengisi bayisebenzisa kanjani imithombo yezokuxhumana ngamabhizinisi abo, I-Hubspot bahlanganise ndawonye isifinyezo se-infographic ukufaka eminye yemiphumela evela kwabaphenduli bocwaningo abangu-6,491 XNUMX bocwaningo olwenziwe yi-Moz. Imininingwane ikhishwe kufayela le- i-webinar ehlangene phakathi I-Hubspot kanye neMoz namuhla. Isibalo esisodwa esithandekayo, u-44.4% wabaphendulile ocwaningweni bathe izinga labo lobungcweti emithonjeni yezokuxhumana likhona Ithuthukile or uchwepheshe Izinga!
I-infographic evela ku: Isoftware Yokumaketha yeHubSpot. Ukuzikhulula: Singabanikazi beHubSpot.
Tags: ezokuxhumana ezithuthukileindawoseomozingcwethi kwezokuxhumanainhlolovo yezokuxhumana
I-Google: Isizinda esingezansi noma ifolda engaphansi yolimi oluningi